I-RxSense iwina umklomelo we-Best Startup Employers 2021 waseMelika ovela eForbes - Inkampani | Julayi 2021
Izidakamizwa Vs. Umngani Ukuphuma Inkampani Izindaba Umphakathi, Inkampani Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Umphakathi Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Cindezela
Main >> Inkampani >> I-RxSense iwina umklomelo we-America's Best Startup Employers 2021
Forbes i-RxSense ekhethiwe—Inkampani yabazali bakaSingleCare—njengomunye wabaqashi baseMelika Abokuqala Kakhulu Abaqashi 2021 — we unyaka wesibili ngokulandelana ! Sigoduke # 148 indawo, sikleliswa ngaphezulu kakhulu kunango-2020. Forbes futhi iStatista ikhethe izinkampani eziphezulu ezingama-500 kulo lonke elase-U.S. zisebenzisa amaphuzu angaphezu kwezigidi eziyi-7 emininingwane ukunciphisa inkambu. Bagxila kuzinyathelo ezintathu eziyinhloko:
IRxSense iqashe abantu abangaphezu kwama-250 eBoston, eNew York City, ePalm Beach Gardens nakwamanye amadolobha ezweni lonke. Uma ungajwayelene neSingleCare, siyinsizakalo yokonga imali enikeza amakhadi esaphulelo asiza abantu ukuthi bonge kuze kufike ku-80% emithini yabo-enikwa amandla yi-RxSense, inkampani yezobuchwepheshe bezempilo ezinikele ekusizeni abantu abaningi baseMelika ukufinyelela nokuthenga imithi yabo.
Cishe 1 ku-4 abantu balwela ukukhokhela umuthi abawudingayo ukwelapha izimo zezempilo, inkinga eye yanda kakhulu selokhu ubhadane lwe-COVID-19 lushayisa i-US Inhloso yethu ukwenza ngcono ukutholakala kwemithi kanye nokubambelela ngokusiza ukunciphisa intengo yemithi oyidingayo, cha kubiza wena.
Kanjani? I-RxSense ne-SingleCare zikhanyisa ukukhanya ebhokisini elimnyama lezindleko zemithi kadokotela, zikuvumela ukuba uqhathanise ukonga kuwo wonke amakhemisi aseduze nawe ngakho-ke kulula ukukhetha intengo ephansi kakhulu. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuletha isigqebhezana sakho kwikhawunta yekhemisi lapho uthatha i-Rx yakho. Kulula kanjalo! Ukusebenzisana kwethu kwamasu ekhemisi, njengeCVS, iWalgreens, neWalmart, kanye namanani entengo aphansi enza ukuthi izigidi zabasebenzisi bethu bakwazi ukuphila impilo enempilo.
Thatha nje kubasebenzi abathanda ukusebenzela inkampani abaziyo ukuthi isebenza ukwenza umhlaba ube yindawo engcono.
Ngiyabathanda abantu engisebenza nabo, kusho uPavel Nabatchikov, umqondisi wezokukhangisa ngedijithali kwaSingleCare. Ngiyayithanda inkampani nomkhiqizo. Kuhle ukuzizwa sengathi ngenza okuthile okuhle, okuthile okunenjongo. Asigcini ngokuthengisa izingubo, empeleni sisiza abantu ukuthi bathole ukufinyelela okungcono emithini engabizi. Lokho kusho lukhulu.
OKUSHIWO: Ukusiza amaklayenti e-SingleCare ukuxazulula izinkinga
Ngicabanga ukuthi lokhu esikwenzayo njengenkampani-sisiza abantu bathole ukufinyelela okungcono ku-Rx yabo-kuyinto enhle, kusho u-Alanna Inniss, umxhumanisi we-akhawunti kwaSingleCare.
ungayifunda kanjani imiphumela yokuhlolwa kwe-covid antibody
Esikwenzayo kwenza umehluko ezimpilweni zabantu, kusho uGeoffrey Bullock, osiza ongoti edeskini kwaSingleCare. Sisebenzisana nezinkulungwane zamakhasimende ngosuku. Ukwazi ukuthi ngingabatshela ukuthi usizo abaludingayo lukhona, futhi ngizama nje ukubanikeza ulwazi olukhulu, yilokho okungishukumisela ukuba ngiphaphame nsuku zonke, ngiye emsebenzini, futhi ngingene ngaphakathi.
OKUSHIWO: Ukuqashwa kwamafoni ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono kakhulu ze-SingleCare zamakhasimende
Funda ngokugcwele Forbes sici, futhi ufunde ngabanye abaphumelele, lapha . Ungabhekabheka futhi usebenzise imisebenzi ku Okufanayo futhi I-RxSense Ku-LinkedIn noma yethu Ikhasi lemisebenzi lapha .
Yini i-Ativan futhi isetshenziselwani?
Ungawuvikela kanjani umkhuhlane
ungayelapha kanjani indlebe emakhazeni
kukhona okujwayelekile kwe-qvar inhaler
bangaki abantu emhlabeni abahlushwa ukucindezeleka
amaphilisi okuvimbela inzalo anemiphumela engemihle
kungani i-colace ikutshela ukuthi uyithathe ebusuku